Android အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြက္ခဒိန်2| APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြက္ခဒိန် 2
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြက္ခဒိန်2APK ကို
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြက္ခဒိန်2ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုရပြက္ခဒိန် app ရဲ့ဆက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်။Feature ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်:
▪ Google ကပြက္ခဒိန်နှင့်အချိန်းနှင့်အတူထပ်တူဥပမာခွင့်ပြုထားတဲ့အန်းဒရွိုက်ပြက္ခဒိန်ထပ်တူပြုခြင်းကိုအသုံးပြုသည်
▪စကားသံကို input ကို option ကို
▪လအပတ်က, နေ့, အစီအစဉ်, အိုင်ကွန်နှင့်တာဝန်များကို widget က
▪လွတ်လပ်စွာ scroll- နှင့် zoomable Multi-နေ့ကအမြင် (1-14 ရက်)
လျင်မြန်စွာဆိုစာရိုက်စရာမလိုဘဲဖြစ်ရပ်များ, တာဝန်များကိုနှင့်မွေးနေ့ထည့်သွင်းဖို့▪အစွမ်းထက်သောစကားသံ input ကိုအင်္ဂါရပ်
တိုက်ရိုက်လုပ်ရပ်များ (ဥပမာတစ်မှေးအိပ်သတိပေးချက်, ပြပွဲမြေပုံတက်ရောက်အီးမေးလ်ရေး) နဲ့▪စိတ်ကြိုက်အသိပေးချက်များကို
access ကို codes တွေကိုနှင့်အတူကွန်ဖရခေါ်ဆိုခနံပါတ်များကိုအဘို့အ▪ထောက်ခံမှု
▪လွယ်ကူစွာ 58 နိုင်ငံများနှင့်ဒေသအများအပြားများအတွက်အားလပ်ရက် add
အဖြစ်အပျက်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲနှင့်အတူ▪ optional ကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသတိပေးချက်
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် RECURRENCE ▪
သင့်ရဲ့ Widgets တွေ, ဖြစ်ရပ်များ, တာဝန်များကိုနှင့်သတိပေးချက်များ၏အသွင်အပြင်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပိုကောင်းအောင် settings ကို၏▪စာရေး
▪သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များ (နေ့, သီတင်းပတ်ကလနှစ်အစီအစဉ်, တာဝန်များကို) လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
▪ Pre-set widget က themes များကိုသုံးပါဒါမှမဟုတ်အလွန်နောက်ဆုံးအသေးစိတ်ရန်သင့် Widgets တွေချ customize ။
အားလုံးပြက္ခဒိန် Widgets တွေအဘို့အ▪တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ preview ကို
▪ (http://emojione.com အီမိုဂျီအနုပညာလက်ရာများ EmojiOne နေဖြင့်အခမဲ့ပေးအပ်) သင့်ဖြစ်ရပ်ကူး 600 ရုပ်ပြောင်တဦး add
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြက္ခဒိန်2အခမဲ့နှင့်၎င်း၏အခြေခံဗားရှင်း၌သငျ features တွေအများကြီးပေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင်သင်သည် app အတွင်းကနေတိုက်ရိုက်အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ပို. ပင်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ features တွေရနိုင်တယ်။
▪လွယ်ကူစွာ Multi-နေ့ကမြင်ကွင်းထဲမှာဆွဲ & တစ်စက်ကို အသုံးပြု. ဖြစ်ရပ်များရွှေ့ခြင်းနှင့်ကူးယူ
▪ဖြစ်ရပ်သမိုင်း, ခေါင်းစဉ် & တည်နေရာ Auto-ပြီးစီး
သင့်ရဲ့ချိန်းဖို့▪ link ကိုအဆက်အသွယ်
▪, delete ရွှေ့သို့မဟုတ်တစ်ချိန်က Multi-Selection ကို အသုံးပြု. မှာမျိုးစုံဖြစ်ရပ်များ copy
သတိပေးချက်များများအတွက်▪အဆင့်မြင့် options များ (ဥပမာကွဲပြားခြားနားသောပြက္ခဒိန်များအဘို့နိုးစက်နှင့်တစ်ဦးချင်းဖုန်းမြည်သံထပ်ကျော့)
▪တိုးချဲ့တာဝန် features တွေ (ဥပမာထပ်ခါတလဲလဲတာဝန်များကို, subtasks နှင့်ဦးစားပေး)
app ကို (ဥပမာမှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်) အတွက်▪ 22 လှပသော themes များ
▪ပိုပြီး widget က themes များ / အားလုံး Widgets တွေအဘို့အဆင့်မြင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာ
တဦးတည်းအမြင်အတွက်အရေးပါကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖေါ်ပြခြင်း▪အသစ်များကို widget က "နေ့ Pro ကို"
▪တစ်ဦးချင်း Configure လုပ်လို့ရတဲ့ဖောင့်အရွယ်အစား
▪သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်ပြက္ခဒိန်ဒေတာ (.ics, .ical)
အဟောင်းစီးပွားရေးပြက္ခဒိန် Pro ကို၏အသုံးပြုသူများနေသမျှကာလပတ်လုံးအဟောင်း app ကို install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အခမဲ့စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်2၏လိုလားသူ features တွေရယူနိုငျပါသညျ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြက္ခဒိန်ဘာလင်အတွက်သေးငယ်ဆက်ကပ်အပ်နှံအဖွဲ့ကတီထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အတည်ငြိမ်ပြီးတည်ငြိမ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသံသရာသေချာစေရန်လုံးဝ Self-စဉ်ဆက်မပြတ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက္ခဒိန် app ကိုအဆင့်မြှင့်နှင့်ညာဘက် app ကိုအတွင်းကနေပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ် features တွေရသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို supporting ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။
- တစ်လမြင်ကွင်းထဲမှာဖြစ်ရပ်အချိန်ကိုပြသ option ကို
- တစ်လအမြင် / အစီအစဉ်တွင်သာစတင်နေ့၌သန်းခေါင်ကျော်ဖြစ်ရပ်များကိုပြသ option ကို
- အစီအစဉ်အတွက် Multi-နေ့ကဖြစ်ရပ်များကိုဖေါ်ပြဖို့ဘယ်လို option ကို
- Widgets တွေအတွက်အသံဖြင့် input ကိုများအတွက် button ကိုပြသနိုင်ဖို့ option ကို
- အမျိုးမျိုးသောအသေးစားတိုးတက်မှုများနှင့် bug ပြင်ဆင်ခြင်းများ
15.91 ကို MB
Appgenix Software များ